Allaha unaxariistee Al-Fanaan Xasan Diiriye Faarax oo geeriyooday. - iftineducation.com
Allaha u naxariistee Fanaankii weynaa ee Xasan Diiriye Faarax ayaa ku geeriyooday dalka Kuwait sida uu Saxaafadda u xaqiijiyay wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Saleebaan Xasan Diiriye.
“ Allaha u naxariisto Aabe Xasan Diiriye wuu geeriyooday,wuxuuna u geeriyooday xanuun uu mudo la liitay oo lagu daweynayay dalkaan Kuwait”ayuu yiri Saleebaan Xasan Diiriye.
Raxmo Xasan Diiriye ayaa hore Website Waagacusub.net ee arrimaha bulshada ka faalooda ugu warantay in Aabaheed uu ku xanuunsanayay Magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo xustay inay jiifka iyo sariirta ka bixinayeen Abwaan Hadrwaawi iyo Cabdi Qeyska halka uu sedex boqol dollar dibada uga diray Boqorka Codka Maxamed Suleybaan Tubeec.
Raxmo oo la hadleysay Waagacusub.net 2 Setember 2007,warbixinteeda halkaan ka akhriso.
Marxuum Xasan Diiriye oo ka mida Fanaaniinta waaweyn ee Waaberi wuxuu ku dhashay Magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug,waxaana lagu xasuustaa heeso Jaceyl iyo Wadani isugu jira sida Fiidmeerta duushaay Fariinteeyda qaad, Waad Mala haboowday,Timir lafbaa ku jirta iyo heeso kale oo badan. Dhageyso
Sanadkaan gudahiisa waxaa geeriyooday Fanaaniin,Abwaaniin,laxamiistayaal,muusikiistayaal laga xusi karo Abwaan Cabdalla Nuuradiin Axmed,Fanaan Mulaxamiiste Axmed Nuur Jaangoow,Abwaan Xasan Sheekh Muumin ,waxaana sidoo kale Muqdisho lagu dhaawacay Al Fanaan Baar sharax.